Wadammada Afrika Oo Dhallinyaradooda kala Soo baxaya Wadanka Qatar | Afrikada
Wadammada Afrika Oo Dhallinyaradooda kala Soo baxaya Wadanka Qatar
Afrikada, Doha: Waxaa Cabashooyin badanka imaaneysaa dhallinyarada Afrikaanka ah ee jooga wadanka Qatar.
Dhallintani ayaa dowladaha waxa ay u daabuleen dalkaasi si nolol fiican iyo shaqooyin ay halkaasi uga helaan.
Waxaa soo ifbaxeysa in dhallinyarada wadammo badan oo Afrikaan ahi ay halkaasi ku silcayaan iyaga oo sheegaya in shaqo xumi baahsan ay ka dillaacday Qadar.
Dhalinyaradan oo laga qaaday dalka ayaa waxaa la sheegay in lagu khayaanay in shaqooyin laga siinayo dalka Qadar, hase yeeshee waxaa la sheegay in markii ay tageen dalkaasii in balamihii laga qaaday looga baxay.
Wadammada Deriska la ah Qatar ayaa wadankaasi ka go’doomiyay dhanka dhaqaalaha iyaga oo sheegay in ay Qatar saaxiib la tahay cadowga Carabta oo ay sheegeen in ay tahay Iiraan.
Wadanka Kenya waxaa culimada dalkaasi ay ku qeylo dhaamiyeen in dhallinyaro badan ay Qatar ku go’doonsan yihiin iyadoo shaqooyinkii loo balanqaaday ay go’een isla markaasina uu dalkaasi sii gelayo musiibo dhaqaale.
Amiirka Qatar ayaa isagu horey u sheegay in si kasta oo loo go’doomiyo Qatar ay dowladiisu u adkeysan doonto iyadoo Liiraha wadankaasi uusan marnaba hoos u dhici doonin.
Dhanka kale, dhaqaalaha suuqyada ayaa laga dareemayaa in uu jiro hoos u dhac weyn iyadoo sanadkii hore ay aheyd markii Qatar ay durba dareentay in isqurxintii iyo Cosmetigii uu meesha ka baxay isla markaasina haatan ay Turkiga iyo Hindiya ka codsatay in ay u sameeyaan dariiqyo dhaqaalaheeda lagu kabo.
Waxaa haatan si toos ah Qatar u kaalmeeya wadanka Iiraan oo wado toos ah u furay suuqyada laga adeegto dhanka cuntada iyo waxyaabaha daruuriga ah, bals xukuumadda ayaa difaacaneysa iyadu dhinacyada howlaha dowladda iyo lacagta dalkaasi iyadoo ku difaaceysa gaaska ay dhoofsato Qatar iyo shidaalka kale.
Si kastaba arrimaha bulshada ayaa waxa ay galeen weji cusub oo halistiisa leh iyadoo laaji’iintu ay isaga baxayaan wadankaasi gaar ahaan kuwii hore u baahnaa ee horumarka iyagu halkaasi u aaday.